2 Makoronike 28 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Makoronike 28:1-27
28 Ahazi+ akanga aine makore makumi maviri paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore gumi nematanhatu ari muJerusarema,+ haana kuita zvakarurama pamberi paJehovha sezvakaitwa natateguru vake Dhavhidhi.+ 2 Asi akafamba nenzira dzemadzimambo aIsraeri,+ uye akatogadzirawo mifananidzo yavanaBhaari+ yakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa.+ 3 Akakwidza utsi hwezvibayiro+ mumupata womwanakomana waHinomu,+ akapisa vanakomana vake+ mumoto, maererano nezvinhu zvinosemesa+ zvemarudzi akanga adzingwa naJehovha pamberi pevanakomana vaIsraeri.+ 4 Aigara achibayira+ zvibayiro nokukwidza utsi hwezvibayiro panzvimbo dzakakwirira+ nepazvikomo+ nepasi pemiti yakasvibirira yemarudzi ose.+ 5 Naizvozvo Mwari wake Jehovha akamuisa muruoko+ rwamambo weSiriya,+ ivo vakamurwisa, vakatora nhapwa zhinji kwaari, vakaenda nadzo kuDhamasiko.+ Akaiswawo muruoko rwamambo waIsraeri,+ iye akamurwisa, akauraya vanhu vazhinji. 6 Naizvozvo Peka+ mwanakomana waRemariya+ akauraya vanhu zviuru zana nezvine makumi maviri pakati paJudha muzuva rimwe chete, vose vari varume vakanga vakashinga, nokuti vakasiya Jehovha+ Mwari wemadzitateguru avo. 7 Zikri, murume aiva nesimba wokwaEfremu,+ akaurayawo Maaseya mwanakomana wamambo naAzrikamu mutungamiriri weimba yacho naErikana aitevera mambo. 8 Vanakomana vaIsraeri vakatapawo hama dzavo zviuru mazana maviri, vakadzi, vanakomana nevanasikana; uye vakapambawo zvinopambwa zvizhinji kwavari, vakabva vaenda nezvakapambwa zvacho kuSamariya.+ 9 Zvino ikoko kwaiva nomuprofita waJehovha ainzi Odhedhi. Naizvozvo akaenda pamberi peuto rakanga richienda kuSamariya, akati kwavari: “Tarirai! Jehovha Mwari wemadzitateguru enyu akaisa vaJudha mumaoko enyu nokuti akanga avatsamwira,+ zvokuti makavauraya nehasha+ dzakasvika kumatenga.+ 10 Zvino mava kufunga zvokuita kuti vanakomana vaJudha neveJerusarema vave vashandirume+ nevashandikadzi venyu. Asi imi hamunawo here mhosva dzamakatadzira Jehovha Mwari wenyu? 11 Zvino nditeererei, mudzorere nhapwa dzamakatapa kuhama dzenyu,+ nokuti Jehovha akutsamwirai kwazvo.”+ 12 Vamwe varume vevakuru+ vevanakomana vaEfremu,+ Azariya mwanakomana waJehohanani, Bherekiya mwanakomana waMeshiremoti naJehizkiya mwanakomana waSharumu naAmasa mwanakomana waHadrai, vakabva vadzivisa vaya vakanga vachiuya vachibva kuhondo, 13 vakati kwavari: “Musapinza nhapwa muno, nokuti zvichaguma nokuita kuti tive nemhosva kuna Jehovha. Muri kufunga zvokuwedzera zvivi zvedu nemhosva yedu, nokuti mhosva yedu ihuru,+ uye Israeri akatsamwirwa+ kwazvo.” 14 Naizvozvo varume vakanga vaine zvombo+ vakasiya nhapwa+ dzacho nezvakanga zvapambwa pamberi pemachinda+ neungano yose. 15 Varume vakanga vakasarudzwa nemazita+ vakabva vasimuka, vakatora nhapwa dzacho, vakapfekedza vose vakanga vasina kupfeka nezvavakatora pane zvakanga zvapambwa. Naizvozvo vakavapfekedza,+ vakavapa hwashu, vakavapa zvokudya,+ vakavapa zvokunwa+ uye vakavazora mafuta. Uyezve, vakatakura vose vakanga vasina simba+ nembongoro, vakaenda navo kuJeriko,+ guta remichindwe,+ pedyo nehama dzavo. Pashure paizvozvo vakadzokera kuSamariya.+ 16 Panguva iyoyo Mambo Ahazi+ akatumira shoko kumadzimambo eAsiriya+ kuti amubatsire. 17 VaEdhomu+ vakauyazve vakauraya vaJudha, vakatora nhapwa. 18 VaFiristiya+ vakarwisa maguta eShefera+ neNegebhu+ yeJudha, vakatora Bheti-shemeshi+ neAijaroni+ neGedheroti+ neSoko+ nemataundi aiva pasi paro neTimna+ nemataundi aiva pasi paro neGimzo nemataundi aiva pasi paro; uye vakagara imomo. 19 Nokuti Jehovha akaninipisa+ Judha nokuda kwaAhazi mambo waIsraeri, nokuti akarega kusazvidzora kuchikura muJudha,+ uye maiva nokusatendeka kukuru kwaiitirwa Jehovha. 20 Tirigati-pirineseri+ mambo weAsiriya akazouya kuzomurwisa, akamutambudza,+ akasamusimbisa. 21 Nokuti Ahazi akatora zvaiva muimba yaJehovha+ neimba yamambo+ nedzemachinda,+ akazvipa mambo weAsiriya sechipo;+ asi hazvina kumubatsira. 22 Zvisinei, panguva yaaimutambudza, iye akatonyanya kuva asina kutendeka kuna Jehovha, ndizvo zvakaitwa naMambo Ahazi.+ 23 Akatanga kubayira kuna vanamwari+ veDhamasiko+ vakanga vachimurwisa, akati: “Nokuti vanamwari vemadzimambo eSiriya vari kuvabatsira,+ ndichabayira kwavari, kuti vandibatsire.”+ Ivo vakaita kuti iye nevaIsraeri vose vaparare.+ 24 Ahazi akaunganidzawo midziyo+ yeimba yaMwari wechokwadi, akatema-tema midziyo yeimba yaMwari wechokwadi+ kuva zvidimbu, akavhara masuo+ eimba yaJehovha, akagadzira atari dzake pamakona ose muJerusarema.+ 25 Akagadzira nzvimbo dzakakwirira+ dzokuti akwidzire vamwe vanamwari utsi hwezvibayiro+ padziri mumaguta ose, kunyange nomumaguta aJudha, zvokuti akagumbura+ Jehovha Mwari wemadzitateguru ake. 26 Mamwe mabasa ake ose+ nenzira dzake dzose, zvokutanga nezvokupedzisira, tarirai zvakanyorwa muBhuku+ reMadzimambo aJudha neaIsraeri. 27 Ahazi akazorara nemadzitateguru ake, vakamuviga muguta, muJerusarema, nokuti havana kumuisa munzvimbo yemakuva emadzimambo aIsraeri.+ Zvino mwanakomana wake Hezekiya akatanga kutonga panzvimbo pake.
2 Makoronike 28